Mhemberero paZuva reMadzimai
Zuva revakadzi muna 2021 riri musi waMarch 8, Muvhuro. We 25 wemwedzi wekutanga wemwedzi weXin Chou Gore (Gore reMombe). Pasi rose, Kurume 8, 1911, ndiyo yekutanga Zuva Rekushanda reVakadzi Zuva. China yakatanga kurangarira iro "Kurume 8" Zuva muna 1922. Naizvozvo, ...
Ndingaite Sei Kuyera Yangu Digger Bhakiti Kukwira Kuwedzera?
Vamwe vatengi sevashandisi vekupedzisira, vatengesi nevanovagovera vanogona kunge vasina hunyanzvi mumabhegi ekuchera. Vanofanira kunge vaine mibvunzo yakadai seyokuti “Wotarisa sei chinocherwa bhaketi mhando?”, “Chii chakanyanya kukosha pamabhegi ekuchera?”, “Ndeipi Bhaketi Inokodzera Digger / Exc yangu ...
Anoshanda Matipi ekureba Rekutakura Upenyu Hupenyu
Akawanda anotarisisa mukuchengetedza uye mashandiro anokonzeresa kupfeka zvakanyanya pazvikamu zvepasi pekutakura. Uye nekuti iko kwepasi pevhu kunogona kuve neanosvika makumi mashanu muzana emuchina wekugadzirisa mutengo, zvakanyanyisa kukosha kuchengetedza nemashandisi emashamba. Nokubatirira ...
Aya matipi matanhatu epasi pekutakura anodzivirira inodhura yekuchera yekuzorora
Kutakurwa kwepasi pemidziyo inorema yakateedzerwa, senge vanochera zvinokambaira, ine zvinhu zvakawanda zvinofamba zvinofanirwa kuchengetedzwa kuti zvishande nemazvo. Kana iyo yepasi pemotokari isingawanzo kuongororwa uye kuchengetedzwa, zvinogona kutungamira kudhorobha ...
Nzira yekushandisa sei Mini Excavator?
Zvicherwa zvidiki zvaionekwa sematoyi nevashandi vane midziyo inorema makumi mashoma apfuura pavakatanga kuunzwa, asi vakawana rukudzo rwevaki vezvivakwa uye vashandi vebasa resaiti nekureruka kwavo kwekuita, tsoka diki, mutengo wakaderera, ...
Kuonga kubva kuBonovo Chikwata
Kubva pakagadzwa BONOVO yakakura zvakanyanya kwazvo gore rega rega, uye isu takavandudza zvivakwa zvehofisi makore ese maviri paavhareji. Zvakare iko kugona kwekugadzira kwakawedzera zvakapetwa gore rega. Chikwata chedu chakanyatsotenda kuti BONOVO haigone kukura nekukurumidza uye zvakadzikama pasina rutsigiro rwe ...
Xuzhou BONOVO Machinery & Equipment Co, Ltd inyanzvi kambani inosanganisa R & D, kugadzira uye kutengesa kwezvivakwa zvemuchina zvigadzirwa. BONOVO headquarter hofisi nefekitori iri muXuzhou guta - "chikuru kuvaka michini base" muCh ...